Lautaro Martinez oo ka sheekeeyey Sidii uu ugu dhawaaday ku biirista barcelona
Home Suuqa kala iibsiga Lautaro Martinez oo ka sheekeeyey Sidii uu ugu dhawaaday ku biirista barcelona
Lautaro Martinez ayaa xaqiijiyay inuu horey wadahadalo ula yeeshay Barcelona laakiin wuxuu mar kale cadeeyay rabitaankiisa ah inuu heshiis cusub la saxiixdo Inter.
Weeraryahanka reer Argentina ayaa si xoogan loola xiriiriyay inuu lacag aad u badan ugu dhaqaaqayo Camp Nou ka hor xilli ciyaareedkii 2020-21 ka dib markii uu ku ciyaaray Serie A kooxda Nerazzurri.
Martinez wuxuu qirtay inuu wadahadalo la yeeshay Los Cules si kastaba ha noqotee tallaabada ayaa ku guul darreysatay inay wax ka qabato iyada oo dhibaatooyinka dhaqaale ee Barca ay noqdeen meel laga wada hadlo oo kubbadda cagta Yurub fursadaha iyaga oo si dhakhso leh u cusbooneysiinaya xiisahooda.
Taa bedelkeed, Martinez wuxuu diirada saarayaa inuu mustaqbalkiisa u hibeeyo hogaamiyaasha Serie A Inter, halkaas oo uu heshiis kula jiro ilaa 2023 kooxda Antonio Conte.
Isaga oo la hadlaya La Gazzetta dello Sport, wuxuu yiri: Waa run, waxaan wadahadalo kula jiray Barcelona Waan ku cadeeyay Conte, waxaan u sheegay: ‘Waxaan ka fikiraa Inter kaliya, tani wax saameyn ah kuma yeelan doonto.’
Si kastaba ha noqotee, waxaas oo dhan waxaa iska leh wixii la soo dhaafay, waxaan u saxiixayaa qandaraas kordhinta Inter Ma aqaan goorta ay jiri doonto ogeysiis rasmi ah Dhanka kale waan ciyaarayaa Mustaqbalkeygu waa halkaan waxaan isku arkaa Milan muddo dheer.
Waan jeclahay wax walba oo ku saabsan magaaladan. Cuntada, taageerayaasha, kooxda. Kaliya waxaan qabaa dareen wanaagsan.
Tan iyo markii uu saftay kulankiisii ugu horeysay ee Ogosto 2018, Martinez wuxuu dhaliyay 33 gool oo Serie A ah – kaasoo kaalinta 10aad ka galay horyaalkaas waqtigaas.
Waxa uu leeyahay heer beddel ah oo toogasho ah oo ah 12.55 boqolkiiba, wuxuu diiwaangeliyay 95 darbo oo bartilmaameed ah wuxuuna leeyahay beddel weyn oo ah 36.36 boqolkiiba.
Intaa waxaa sii dheer, Martinez wuxuu leeyahay sagaal caawin, wuxuuna abuuray 79 fursadood oo loogu talagalay asxaabta kooxda – 15 ka mid ah waxaa lagu qeexay ‘fursado waa weyn’ oo ay sameysay Opta.
Xilli ciyaareedkan oo keliya, wuxuu dhaliyay 13 ka mid ah 23 kulan oo uu saftay – kaliya wax ka yar intii uu maamulayay xilli ciyaareedkii hore oo dhan – si uu uga caawiyo Inter inay hogaanka u qabato.
Kooxda Conte ayaa afar dhibcood ka sareysa kooxda ay xafiiltamaan ee Milan oo 3-0 kaga badisay kulankii Derby ee isbuucii hore, halka kooxda difaacaneysa Juventus ay sideed dhibcood soo laabatay.
Martinez ayaa ka gaabsaday inuu ku tilmaamo Inter inay yihiin \_”kuwa ugu cadcad\_” hanashada horyaalka laakiin wuxuu leeyahay guusha kooxda waxaa sabab u ah jawiga uu abuuray Conte.
Kuwa ugu cadcad waa eray aanan jeclayn. Laakiin waxaan ku jirnaa miiska dushiisa tanina waxay ina siinaysaa dareen wanaagsan. Waligey kuma dhicin inaan farqiga noocan oo kale ah ka helo kooxda kaalinta labaad, ”ayuu raaciyay.
Maahan dhacdo. Waa natiijada shaqada aan ku qabanno tababaraheena. Sida uu jecel yahay inuu dhaho: ‘Waxaan ka shaqeyneynaa inaan ka tagno Inter sida ugu macquulsan.’
Waxaan nahay koox kaladuwan oo leh Conte, oo aad u mideysan, qof walbana u dagaallama kuwa kale, waan is caawinnaa waana astaan wanaagsan.\_”
Tan iyo markii laga badiyay kulankii ugu horreeyay ee xilli ciyaareedka ee bishii Oktoobar, Inter ayaa la garaacay hal jeer 19 kulan oo Serie A ah.
Cadaadis ayaa laga dhisayay Conte ka dib bilowgii taasoo keentay in Inter ay badiso seddex ka mid ah toddobadii kulan ee furitaanka horyaalka, halka sidoo kale laga reebay Champions League.
Martinez wuxuu cadeeyay guuldaradooda Yurub inay tahay daqiiqaddii u weecday xilli ciyaareedkii Inter.
Si Fudud, waxaa laga ciribtiray Champions League. Aad ayey u dhaawacday waxaanan midba midka kale u sheegnay in bartilmaameedkayagu uu noqon lahaa cinwaanka Serie A, ”ayuu yiri Martinez.
Conte wuxuu noo sheegay inaan daryeelo faahfaahin kasta oo yar, garoonka dhexdiisa iyo dibaddiisa. Taasi waa sida aad u guuleysato.
Taasi waa waxa aan midba midka kale ugu sheegno qolka labiska, maalin kasta. Taasi waa sida aad u guuleysato. Kaliya waxaan u ciyaarnaa inaan badino.\_”
Previous articleAc milan oo xiiseyneyso weraryahanka Lazio Immobile.
Next articleManchester City oo garaacday West ham United iyadoo 13 Dhibcood ku qabtay Horyaalka